“Liverpool waxay heysataa weeraryahano banaanka soo dhigay awoodooda ciyaareed” – Valverde – Gool FM
(Yurub) 20 Abriil 2019. Macalinka kooxda Barcelona Ernesto Valverde ayaa amaan kala dul dhacay dhigiisa Manchester City ee Pep Guardiola, kahor kulanka La Liga ay caawa ku marti galin doonaan Real Sociedad garoonka Cump Nou.
Ernesto Valverde oo kasoo muuqday shir jaraa’id kahor ciyaarta caawa ay kooxda Real Sociedad kula ciyaari doonaan garoonka Cump Nou ayaa wuxuu ka hadlay dhowr arimood uu qeyb ka yahay tababare Guardiola wuxuuna yiri:
“Guardiola shaki la’aan waa tababaraha ugu fiican, iyadoon loo eegin inuu ka haray tartanka Champions League”.
“Real Sociedad waxay heysataa ​​ciyaaryahano aad u wanaagsan, lakiin dhiirogelinta aan heysano ayaa ah inaan dooneyno inaan guul gaarno, waxaan heli karnaa 9 dhibcood oo naga dhigeysa inaan ku guuleysano horyaalka”.
“Waxaan u ciyaareynaa inaan ku guuleysano horyaalka, tani maahan kaliya ciyaar, laakiin waxay noqon kartaa talaabo aan horey ugu qaadi karno ku guuleysigeena horyaalka”.
Intaas kadib macalinka reer Spain ayaa su’aalo laga weydiiyay kulanka adag ay kooxda Liverpool kula ciyaari doonaan wareega afar dhamaadka ee tartanka Champions League, wuxuuna ku jawaab celiyay.
“Waa koox aad u xoogan, waxay heystaan weeraryahano si cad u qeexay awoodooda ciyaareed xili ciyaareedkan iyo kii lasoo dhaafay”.
Inter Milan oo talaabo u jirta inay heshiis la gaarto xidig ka tirsan kooxda Manchester City